काजु खेती (Cashew Farming) - काजु, फल र रातो फलको स्वाद गुलियो हुन्छ
काजु, नदेखेको अनि नखायको सायद कोहि छैन होला । जहिले नभएपनि पुजा र चाडपर्वहरुमा सबैजसोले प्रयोग गर्दै आएको छौ । यसको उत्पति भएको स्थान दक्षिण अमेरिकाको व्राजिल मानिन्छ । यसको फल हेर्दा लाम्चो नास्पति जस्तो हुन्छ र पाक्दा पहेलो, रातो कलेजी रंगको हुन्छ र फलको स्वाद गुलियो हुन्छ । यस्को विरुवा ५-१५ मिटर सम्म अग्लो हुन्छ र पातहरु हेर्दा चिउरीको पात जस्तो देखिन्छ । पहिले कफि भयपनी अहिले आएर संसारका धेरै देशहरुको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमख कृषिवालिको रुपमा विश्व वजारको ठुलो हिस्सा ओगटेको फलफुल मानिन्छ । काजुको उत्पादन तथ्यांकलाई हेर्दा व्राजिल, भारत, भियतनाम, नाईजेरिया जस्ता देशमा उत्पादन भएको देखिन्छ । काजुको स्थानिय जातहरु ३ वर्ष पछि फल्न सुरु गर्छ भने विकास गरिएका प्रजातिका विरुवा भने पहिलो वर्षवाट नै फल्न सुरु गर्दछन्। काजुको उत्पादन बोटको जातको आधारमा १२-४२ केजी प्रतिबोट हुन्छ ।
किन गर्ने काजु खेती / फाइदाहरु
हाम्रो देश कृषिप्रधान देश भयपनी कृषिमा आर्थिक उन्नति गर्न सकेको छैन। त्यसको कारण एकै पटक धेरै उत्पादन अनि मुद्रा आर्जन कृषिवालि उत्पादन नभएको हो जस्तो लाग्छ।
काजु खेतिमा खासै कुनै रोग नलाग्ने, खेती गर्न सजिलो
काजु बिक्रि नभयर खेर खेर नजाने अनि अलि धेरै समय राख्दा नि कुहिएर खेर नजाने
आफ्नो जग्गा भए, थोरै लगानी मा धेरै आम्दानी गर्न सकिने
खेर गएको जग्गाको उपयोग
काजु खेती सँगसँगै अरु वेबसाय, जगिर गर्न सकिने
यो गर्मि हावापानी (२५-५४ डिग्री सेल्सियस) र समुन्द्र आसपासको तटियक्षेत्र तथा सो सरहको हावापानी पाइने क्षेत्रमा यस्को उत्पादन गर्न सकिन्छ। काजुको फल लाग्ने समयमा तापक्रम ३६ डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको हुनु र फलको वृद्धि विकासको लागि २० डिग्री सेल्सियस भन्दा कम हुनु उपयुक्त मानिदैन यसले फल झर्ने समस्या आउन सक्दछ । समन्द्र सतहवाट ७०० मिटर उचाइ सम्मको वार्षिक वर्षा १०००-२००० मि. मि. हुने क्षेत्र उपयुुक्त हुन्छ । अत्यधिक वर्षा तथा लामो समय सम्म वादल लाग्नु काजुको लागि उपयुुक्त हुदैन र यस्तोमा फल उत्पादनमा असर पर्दछ।
काजु उत्पादनमा माटोले खासै फरक पार्दैन, जस्तोसुकै माटोमा पनि उब्जाउन सकिन्छ । त्यसैले काजुको विरुवा अन्य वाली लगाउन नसकिने वा नसप्रिने खालको रुखो, बलौटे जमिनमा मा पनि गर्न सकिन्छ । यस्को लागि उपयुुक्त माटो भनेको थोरै अम्लिय भएको बलौटे दोमट माटो हो। माटोमा PH को मात्रा ८ भन्दा बढी हुनुहुदैन।
नेपालमा काजु खेतीमा अबसर
नेपालमा काजुखेती तराइको उष्ण प्रदेशिय क्षेत्र खासगरी पुर्व देखि पश्चिम तराइको मैदानी भागमा गर्न सकिने संभावना देखिन्छ । यसको उत्पति व्राजिलमा भयपनी अहिले हाम्रो छिमेकि देश भारतमा सवै भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा काजु खेति गरिन्छ । भारतमा काजुको खेति खासगरी आशाम, मेजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, केरेला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट, तामिलनाडु, आन्द्रप्रदेश, ओरिशा, पश्चिमवंगाल, छत्तिसगढ तथा नागालैण्ड क्षेत्रमा धेरै गरेको पाइन्छ । भारतले प्रति वर्ष २०० करोड भन्दा बढीको काजु निर्यात गर्ने गर्दछ । हाम्रो देश नेपालको हावापानी भारतको आसाम, छत्तिसगढ, मेघालय आदि क्षेत्रसंग मिल्दोजुल्दो हावापानी छ । त्यसैले तराइ क्षेत्रको पुर्व देखि पश्चिम सम्म काजुखेति गर्न सकिने संभावना देखिन्छ ।
तपाईलाई यो पढेर कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला र केही सल्लाह सुझाव भए इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
1 thought on “काजु खेती (Cashew Farming)”